Kutengesa Kwenhare: Ita kuti ive yako | Martech Zone
Kutengesa Kwenhare: Ita kuti ive Yega
Hipcricket's 2014 online ongororo, Maonero evatengi pane Kushambadzira Kwenhare, yakaitwa muna Kubvumbi 2014 uye yakanangana nevanhu vakuru mazana maviri nemakumi maviri nevaviri muUS. Ongororo iyi yakawana kuti Vashambadziri vatove kutora nhare uye vatengi vari kupindura. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevakabvunzwa vakati vaizogamuchira meseji kubva kuchiratidzo mumwedzi mitanhatu yekupedzisira uye ingangoita hafu yevatengi vakawana iwo meseji ichibatsira.
Nekudaro, ivo vashambadzi vanoshaya chiratidzo kana zvasvika pakutumira akakodzera, akasarudzika mameseji, zvinoodza moyo vatengi:
52% vakati meseji yakanzwa intrusive kana spammy.
46% vakati meseji yakanga isiri zvinoenderana nezvavanofarira.
33% vakati iwo meseji haina kupa chero kukosha.
41% vakati vaizogovana ruzivo rwakawanda nemabrands kana vachikurudzirwa zvinoenderana zvinopihwa kana coupon.
Iko kune yakakura nzvimbo yekukura kwezvigadzirwa kuti vagadzire zvine chinangwa uye zvinogara kubatana nevatengi vavo. Uku kutsvagurudza kunoratidza kuti vatengi vari kushingairira kuita zvigadzirwa kuburikidza neshambadziro kushambadzira, izvo zvinokurudzira. Asi, mabrand anofanirwa kuendesa akakodzera uye akasarudzika macampaign kana ivo vacharasikirwa nechikamu chiri kukura chemusika. Doug Stovall, Hipcricket COO
Tags: hipcricketmobile advertisingmafoni couponsmobile marketingsms couponssms inobatasms messagesms inopachinyorwa kirabhumesejimameseji
Iyo Smartphone Shanduko! Wagadzirira Here?